Zvigadzirwa vatengesi uye fekitori - China Zvigadzirwa Vagadziri
Kurarama mapepa akateedzana blade Xuzhou Chengzhi Machinery Toll CO, .LTD. Ndiyo kiyi bhizinesi rakasarudzika mukugadzirwa kwemaindasitiri mashizha, tinovimba nemakore mazhinji ehunyanzvi mapanga uye muforoma yekugadzira ruzivo, zvinoenderana nezvinodiwa zvakasiyana zvevatengi kuti vape yakanakisa kufa reza, kusangana nezvinodiwa nevatengi, fekitori iri kugadzirwa kwesimbi, simbi disc disc inocheka mashizha, blade metallurgical kupisa shears, chikepe chinotonhora shears kutema mashizha, corrugated bo ...
Concrete Musanganiswa Masvo eSicoma Bhs Sany Liebherr
Concrete Mixer Blades yeSicoma Bhs Sany Liebherr Musanganiswa wekusanganisa chinhu chakajairika zvemuchina mukugadzirwa kweinjiniya uye kugadzirwa kwemaindasitiri. Kunyangwe iro banga remusanganisi rinoshandiswa zvine musoro uye nenzira kwayo zvine pesvedzero huru pahunhu hwekusanganisa nekushanda kwemidziyo inosanganisa. Iwo evhu rekusanganisa anonyanya kushandiswa mune yekusanganisa system yemhando dzakasiyana dzekusanganisa zvirimwa. Mushure memhando dzese dzezvinhu zvakayerwa zvakasiyana mune yekuyera hopper, iyo system yekutumira inotumira mirairo ...
Nhanganyaya Iyo yepamusoro-chromium chiwanikwa nyundo inogadzirwa nekambani yedu inogadzirwa neakakwira chromium yakawanda-element chiwanikwa simbi kurodha ne molybdenum, vanadium, nickel, niobium uye nezvimwe zvakakosha simbi zvinhu. Mushure mekuomarara kwemakemikari emvura, iko kuomarara kwekugadzirisa kwave kuri nani kwazvo. It integrates zvakanakira mukuru-chromium chiwanikwa kusanganisira kwazvo kusakara nemishonga, mukuru tembiricha okisijeni nemishonga, ngura nemishonga, pamwe mukuru kuomarara uye machinability kuti cas ...
Laser yekucheka achine manhamba ekudzora sisitimu Yakareruka nyanzvi yekushandisa interface A-yekupedzisira-akangwara uye ehunyanzvi system yeiyo Ultra-yakakwira simba fiber laser yekucheka zvinodiwa.Stable uye yakavimbika, nyore kuendesa, nyore kugadzirisa, kugadzirwa kwakachengeteka, zvakapfuma mabasa, kugona kuita uye zvimwe hunhu, Iko parizvino iri musika yakanyanya yepamusoro yakatsaurwa laser yekucheka system. Easier kugadzirwa manejimendi Kugadziriswa uye kudhirowa kwakaparadzaniswa kuve nechokwadi chekugadzikana kwesarudzo yeproce ...
Paver auger blade Iyo yekumhepo chipenga cheya paver inoumbwa nejasi uye zononoka. Nzvimbo yechipenga yakasiyana neyezvinhu, iyo inogona kutora chinzvimbo chakanaka mukufambisa kana kudzora zvinhu. Kunyangwe iyo blade yeiyo paver ingori diki uye isingazivikanwe chishongedzo, asi mashandiro ayo anokanganisa kuendesa uye kugovera system yeiyo paver zvakananga. Yakakwira mhando paver blade inokwanisa kugona nemhando dzese dzakanyanyisa kusakara nharaunda, uye neakanaka ekupfeka resista ...
WYP akateedzana CNC Electro-hydraulic servo yekudhinda akamedura
Electro-hydraulic Servo Press Brake Yakazara simbi yekutenderera mamiriro, uye yakazara vibration kurapwa; Electro-hydraulic servo system inowirirana neyakaunzwa mutsara zviyero, synchroni-zation yakanyatsojeka uye kukotama nemazvo kwakanyanya kukwirira; Standand ndeye CNC 3 + 1 axis, Y1 Y2 XV; Otomatiki kugoverwa kwe hydraulic deflection kubvisa mhedzisiro yeshevedhi chimiro chinotsvedza kune worlpiece quslity; Yakapinza yakabatana hydraulic kudzora system kudzikisa pombi yekumisikidza, uye kukurira iyo leakage; Gamuchira ...
Anti vibration rabha yemugwagwa roller
Anti vibration yerabha yemugwagwa roller roller anti vibration rabha yakagadziriswa neakasikwa rabha, mazhinji acho mukambani medu inogadzirwa kuburikidza neInjection Pressure Vulcanization. Izvo zvakachengeteka kushandisa rubber vulcanization uye inogona kuwana yakakwira splice. Yese yerabha yakasikwa inotumirwa kubva kuThailand uye iyo yekubatanidza glue inotumirwa kubva kuAmerica, iyo mhando yayo inovimbiswa. Iyo damping yerabhuroka block inogona kuiswa kune yemugwagwa roller uye compactor yemhando dzakasiyana mota dzine dzakasiyana ne ...
Rubha Track Pad
Nhanganyaya Isu takasarudzika mukugadzira ese marudzi erabha pad yezvinotevedzwa michina ine inopisa kufa yekuchengetedza maitiro, ayo akasiyana nekukanda uye kutsikisa. Zvigadzirwa zvinogadzirwa neinopisa kufa yekuchengetedza maitiro zvine simba kupfuura zveaya maviri maitiro. Simbi simbi chikamu chakakosha mukugadzirwa kwerabha pad yemichina inoteedzerwa. Kambani yedu inotora zvigadzirwa zvemberi kugadzira 45 # Simbi uye 45Cr zvinhu. Tinogona zvakare kugadzirisa hukuru hwakasiyana hwerabha pad yeinotevedzwa mac ...
Anocheka mazino Musiki anocheka kazhinji ane zvikamu zvina, kusanganisira anocheka mazino (chiwanikwa), mucheki mutumbi, shizha remuchirimo uye circlip, nepo mazino mashoma chete ekucheka, muviri wemutemi uye circlip, nezvimwe. Kugaya kunoda kuti mazino akacheka acheke pasi pakutanga. Naizvozvo, iwo anocheka mazino anofanirwa kunge ari ekushomeka kusagadzikana. Anocheka mazino anowanzo sinteredzwa neakakora Tungsten Cobalt chiwanikwa upfu munzvimbo yekutsiva nharaunda, uyezve ndokusunganidzwa mumutumbi wemuviri uine maficha e-flexural stre ...